control motor Stepper waa qalab in ay gacanta ku booska, xawaaraha iyo Xuddunta ah drive a farsamo. Waxaa loogu talagalay gacanta ku mooshin of matoorrada korontada. Waxay leedahay isu gudbinta si toos ah iyo buuga bilaabo iyo joojinta engine ah, iyo xulashada iyo sixitaanka ee xawaaraha. Sidoo kale la filayaa in ay se ...
matoorrada Stepper caadiga ah ee microprocessors ama istaago xakamaysada caadadii yihiin, iyo xoog waxaa inta badan gacanta ku wareeggeedii shiday stepper darawal baabuurta iyo transistors awood. dhaqdhaqaaqa saxda ah waa suurto gal, laakiin kakanaanta inta badan dalka hiwaayadda stepper ee "waxaa laga yaabaa in maalin maalmaha" qaybo bin. Laakiin stepper ...
guuro motor Stepper in tallaabooyin yaryar guud ahaan ku qoran qoraalka ee degrees. motor tallaabo A si ayna miiqdaan in hal jiho ah hadda waxaa dhex maray gariiradda ah, ka dibna kale, ka dibna ku fuuli jiray koowaad ee polarity soo horjeeda, ka dibna labaad la polarity dambe, sidoo kale. horreeyaan lagu celin c ...